Square Direct in Square tuuboyinka Mill - Shiinaha Shijiazhuang Zhongtai tuuboyinka
Waxaa si toos ah waxaa laga rogo strip steel oo la leexiyo in ay laba jibbaaran & qaabka afar gees ah, ka dibna waxa Weld dhammayn dhismaha.
Astaamaha iyo Faa'iidooyinka:
1) barbar dhigtaa wareega jidka la xirrira laba jibbaaran & laydi, sidan u Khayr roon qaabka qarkiisa iskutallaabta qaybta, eego, semi-dhexroor of ARC hoose waa Small, iyo berkedda qarkeedii waa siman yahay, aragti waa joogto ah.
2) load The line oo dhan waa ku yar yahay, gaar ahaan qaybo ka mid ah qiimaynta.
3) width ee aaladda wax bir yar yahay oo ku saabsan 2.4-3% ka badan wareega galay square & laydi, waxaa baabbi'in ee wax ceeriin badbaadin karo.
4) Waxaa la qabsadaan hab multi-dhibic isqaloocinta ah, iska ilaali ciidanka axial iyo kooxda abrasion, yareeyo tallaabada sameynta halka loo hubiyo tayada, Dhanka kale aan u yareeyo Ture xoogga iyo abrasion duuban.
5) Waxaa la qabsado isaguu isku nooca ah oo ku saabsan inta badan taribuunka, waxaa ay ogaadaan in hal xidhmo oo isaguu soo saari kartaa daraasiin biibiile square & leydi la faahfaahinta kala duwan, waxay taasi yareyn dukaanka of duuban, jaban oo ku saabsan 80% on duuban, Soonkii isbeddelkaas Roman, waqti gaaban ka mid ah design cusub ee wax soo saarka.
Fiiro gaar ah: Waxaan la qorsheeyo karo iyo soosaarka Mashiinka qaadashada biibiile oo waafaqsan shuruudaha macaamiisha.
Previous: xawaaraha sare ee tuuboyinka Mill
Next: Ahama Steel tuuboyinka Mill
Tube Automatic Mill
Madaxtooyada tuuboyinka Mill
Square Direct Si Square tuuboyinka Mill
galvanized tuuboyinka Mill
HF Mill Tube
Tube Frequency High Mill
Frequency High Alxanka tuuboyinka Mill
High qiray in Tube Mill
High Speed tuuboyinka Mill
Iron tuuboyinka Mill
Manufacturer Mill Tube
Multi-Functional tuuboyinka Mill
Biibiile Oo Tube Mill
Biibiile Mill Waayo Sale
tuuboyinka Mill Wasakh Rollers
tuuboyinka Rolling Mill Machine
tuuboyinka Alxanka Mill
Machine tuuboyinka Square
Square tuuboyinka Makiinado
Machine Square tuuboyinka Samaynta
Square tuuboyinka Mill
Square tuuboyinka Production Line
Square Steel tuuboyinka Samaynta Machine
Machine Tube Square
Makiinado Tube Square
Tube Square Machine Making
Mill Tube Square
Line Production Tube Square
Ss tuuboyinka Mill
Steel Square tuuboyinka Samaynta Machine
Tollayn toosan Mill Tube
Tube-saaraha Machine Mill
Qiimaha Tubooyinka Mill Factory
Weld tuuboyinka Production Mill
Welded tuuboyinka Cold Roll hore ee Mill
Welded tuuboyinka Mill
Alxanka Mill Tube